Window 2008 Server with2ISP connection — MYSTERY ZILLION
Window 2008 Server with2ISP connection
July 2008 edited March 2009 in Networking
I'm using Window Server 2008 but i few about server windows and Networking.
i connect with2ISP. 1st is MPT Adsl and 2nd is Wi-Max BaganNet.
so i have2network with bulit-in lan Card and Sepreate lan card.
but i can't use both connection atatime.
i want to use both connection at one time.
Would there someone help me to solve this problem?
i'm using firefox3with MPT connection and Opera with Ulrasurf with MPT proxy.
And i want to use Wi-Max BaganNet with flock 1.2.2
Please teach me how should i do? :39:
jkzyrus wrote: »
i'm Using Window Server 2008 But I Few About Server Windows And Networking. 1st Is mpt Adsl And 2nd Is wi-max Bagannet.
And I Want To Use wi-max Bagannet With Flock 1.2.2:39:
I'm using Window Server 2008 but i few about server windows and Networking.i connect with2ISP. 1st is MPT Adsl and 2nd is Wi-Max BaganNet.
so i have2network with bulit-in lan Card and Sepreate lan card.but i can't use both connection atatime.i want to use both connection at one time.Would there someone help me to solve this problem?i'm using firefox3with MPT connection and Opera with Ulrasurf with MPT proxy.And i want to use Wi-Max BaganNet with flock 1.2.2Please teach me how should i do? :39:
မောလိုက်တာ ဆရာသမားရယ် ရှာလိုက်ရတာ ခေါင်းမူးသွားတယ်..
ဘာပြောရမယ်ဆိုတာ မေ့သွားတယ်.. ခဏခဏ.........အော်
Window Server 2008 ဆရာသမား စားမေးပွဲဖြေဆိုဖို့ ကြိုးစားနေလာဗျာ...
မမြင့်လွန်ဘူးလားဗျာ.. တအားကို OS Role တက်ပြီး Internet Speed အများများ
MPT သူက logon ၀င်ရတယ်.. ကိုယ်ပိုင် ip မပေးဘူး။
ယခုရက်သတ္တပတ်လောက်က ပြုပြင်ထားတယ်.. မြန်လာတယ်...
ဖြစ်နိုင်ရင် 512 လောက်တိုးလိုက်ပါလား အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်...၊
အင်းအင်း မကြိုတ်သေးဘူးဆိုရင် 1MB ကိစ္စတော့ သိတယ်မဟုတ်လား
Server ထိုင်ပြီးသုံးရင်လဲ အဆင်ပြေနိုင်တယ်.. IP ရအောင်ကြိုးစားရင် ပိုအဆင်ပြေနိုင်တယ်..
Wi-Max BaganNet အဲဒါကြီးတော့ မရှိလို့ မစမ်းသပ်ရသေးဘူး၊
Broadband ကိုတော့ router နဲ့ခံသုံးထားတယ်..
BaganNet သုံးပြီ ဆိုရင် DNS ၀င်ရတယ်..၊ မ၀င်ရင် local network ကို လာထိခိုက်တယ်..
MPT ADSL 2+ ကိုတော Server ထိုင်သုံး၊ Broadband ကိုတော့ router သုံး
အားလုံးအဆင်ပြေနိုင်တယ်..MPT ADSL 2+ကိုတော့ အကြိုတ်ဆုံးပဲ။
Broadband ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ဖုန်းလိုင်းနဲ့ ADSL 2+ ကို 1MB လောက်
ကြိုးစားလိုက်ရင် Wi-Max, Broadband ထက်ကောင်းတယ်.. လက်တွေ့ပါ..
အဆင်မပြေရင် ဆက်လက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်.. အားလုံးလဲ ဆွေးနွေးပေးကြပါ..ကျေးဇူးတင်လျက် iceos
yap very thanks for discussion Brother Icefirester.
I'm using MPT Adsl 2+ with 512 at server and Wi-Max Baganet 256.
But the problem which i'm facing is i can't use both connection at once.
i can't give ICS to both connection. i don't have any router.
firefox with Wi-Max
Opera with MPT
flock with Freedom
IE with Ultrasurf
if i use router for Wi-Max , can i solve the above problem?
့yap very thanks for discussion Brother Icefirester.
ကျွန်တော်ကတော့ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှ one ISP သုံးစေချင်တယ်ဗျာ..
use ICS both connection ကတော့ သိပ်ပြီးအဆင်မပြောပါဘူး၊
ISP တစ်ခုကို one computer သာသုံးစွဲတာကောင်းပါတယ်..
thanksalot for your advice. bro Icefirester.
ISA မှာ ဘယ်လို configure လုပ်ရမလဲတော့မသိဘူးရှင့်။:106: ဖြစ်နိုင်ရင် Dual WAN Port Router သုံးကြည့်ပါလား။:) WAN Port ၂ ခု ပါတော့ connection ၂ ခုတစ်ပြိုင်တည်းသုံးလို့ရတယ် လို့ကြားဖူးတယ်ရှင့်။ D- link မှာရှိတယ်။ သူက connection တစ်ခုပြတ်သွားရင် နောက် connection တစ်ခုနဲ့တက်သွားတယ်။ ဥပမာ - MPT က link down သွားတယ်ဆိုရင် Bagan နဲ့တက်သွားတာပေါ့။ Connection မပြတ်တော့ဘူးပေါ့။ ၂ ခုလုံး down သွားရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ရှင်။:D:D
isa မှာ ဘယ်လို Configure လုပ်ရမလဲတော့မသိဘူးရှင့်။:106: ဖြစ်နိုင်ရင် Dual Wan Port Router သုံးကြည့်ပါလား။:) Wan Port ၂ ခု ပါတော့ Connection ၂ ခုတစ်ပြိုင်တည်းသုံးလို့ရတယ် လို့ကြားဖူးတယ်ရှင့်သူက Connection တစ်ခုပြတ်သွားရင် နောက် Connection တစ်ခုနဲ့တက်သွားတယ်။ ၂ ခုလုံး Down သွားရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ရှင်။:d:d
ဒီလိုလုပ်ရင်ကော... ISA ရရင် (2)လုံးထိုင်လိုက်..
၁ လုံးက MPT, ၁ လုံးက WiMax, ပီးတော့ client မှာ သတ်မှတ်ရာ ဆာဗာအိုင်ပီတွေပေးလိုက်ပေါ့..
ဥပမာ: wimax အတွက် ဆာဗာက 192.168.10.1 ဆိုရင် firefox မှာအဲဒါပေးလိုက်ပေါ့
dual wan router ကိို မသုံးချင်ရင် စက်တစ်လုံးထဲမှာ ISA server နဲ့ rainconnect ဆိုတဲ့ software ၂ ခုကို ပေါင်းသုံးလိုက်။ rainconnect က isp2ခု ကို NLB(Network Load Balancing) လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အခု rainconnect က နောက်ထပ် support မလုပ်တော့ဘူး ကြားတယ်။ configuration တော့ သေချာ မလုပ်ကြည့်ဖူးဘူး။ အင်တာနက်ထဲ လျှောက်ရှာကြည့်ရင်းနဲ့တွေ့ထားတာ။
default gateway, isp မတူရင် dual wan router နဲ့ load balancing လုပ်လို့မရဘူးလို့ကြားမိပါတယ်။ သေချာတော့မစမ်းဖူးသေးပါ။ performance တကယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ပြောမယ့်နည်းလမ်းက နည်းနည်းတော့အကုန်အကျများနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရိုး router နှစ်လုံး၀ယ်လိုက်ပါ
isp မတူတဲ့ MPT ရော bagan ပါ တစ်လိုင်းစီကို အဲဒီ router တစ်ခုစီကနေဖြတ်ထွက်လိုက်ပါ။
အဲဒါကိုမှ dual wan router ထဲထည့်လိုက်ပါ။ အဲဒါဆို gateway တူသွားပါလိမ့်မယ်။ ပီးရင် dual wan ထဲမှာ load balancing အတွက် configure လုပ်ပီး dual wan router ထဲကထွက်လာတဲ့ lan ကိုမှ ISA Server ထဲကို external အနေနဲ့ထည့်လိုက်ပါ
ဟီးဟီး နည်းနည်းများရှုပ်သွားလားမသိဘူး။ ၀င်ဆွေးနွေးကြည့်တာပါ။
rainconnect software လေးများရနိုင်မလားလို့
forcerider wrote: »
ဟင့် သားကStaffလေ၊ Router 2လုံး၀ယ်နိုင်ဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် rainconnect လေးကိုတော့ Test လုပ်ကြည့်ပါဦးမယ်။ Thanks all for all of suggest.
I'm using Window Server 2008 but i few about server windows and Networking.i connect with2ISP. 1st is MPT Adsl and 2nd is Wi-Max BaganNet.:39:
ချစ်ညီ jkzyrus ရေ
MPT ကတော့ ရှိလို့ စမ်းသပ်လို့ရပါတယ်..
Wi-Max ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ ရန်ကုန်တစ်ခုတည်းသာရလို့
ကိုယ့်က မန်းကဆိုတော့ စမ်းသပ်လို့မရလို့ပါ...
microsoft.com ကို မေးကြည့်ပါလား၊
server2008 က နည်းပညာတွေ ပြောင်းလဲလားတယ်..၊ စကားအသုံးအနှုန်းလဲပြောင်းလဲလားတယ်..
2003 server က system စကားတွေနဲ့ မတူးတာတွေများပါတယ်.. function တွေပိုစုံလာတယ်.
မတူညီတဲ့ Bridge connections တွေတော့ ရတယ်.. မေးကြည့်ပါလား ချစ်စွာသော iceos
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်စမ်းသပ်ပြီး ရရှိတဲ့ အတွေ ့အကြုံတွေကို ပြန်ပြီးတော့ Share ပမယ်။
" Broadband ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ဖုန်းလိုင်းနဲ့ ADSL 2+ ကို 1MB လောက်
ကြိုးစားလိုက်ရင် Wi-Max, Broadband ထက်ကောင်းတယ်.. လက်တွေ့ပါ.." ........ADSL 2+ အကြောင်းလေးကို ဖြစ်နိုင်ရင် အသေးစိတ်လေးပြောပေးပါခင်ဗျာ ...... Wi-Max, Broadband ဘယ်လိုကွာလဲ... ဘာတွေပိုသာသွားတာလဲ..... MZ Member အားလုံးအား...လေးစားအားကြလျှက်.....
" Wi-Max, Broadband ဘယ်လိုကွာလဲ... ဘာတွေပိုသာသွားတာလဲ..... MZ Member အားလုံးအား...လေးစားအားကြလျှက်.....
လူတွေပြောပြောနေကြတဲ့ Broadband ဆိုတာ Broadband Wireless Local Loop ကိုဆိုလိုချင်ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ Broadband လို့ပဲအလွယ်ပြောနေကြတော့မသိတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ broadband ဆိုတာ wireless ကိုပြောတာလို့ပဲထင်သွားကြတယ်။ တကယ်တမ်းဆို ADSL လဲ broadband ပဲလေ။ Broadband ဆိုတာမြန်မာလိုဆိုရင်တော့မြန်နှုန်းမြင့်ပေါ့။Bandwidth များတဲ့ဟာကို ဆိုလိုတာပါ။ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ wireless လို့ပဲသုံးသင့်တယ်ရှင့်။ Wi-Max ကတော့ Broadband wirless ရဲ့ upgrade version ပါပဲပြောမယ်ဆိုရင်။ သူက indoor unit မလိုတော့ဘူး။ Power over ehternet (POE) ကြိုးနဲ့သွားတာ။outdoor unit တစ်ခုပဲလိုတယ်။ အခေါ်အ၀ါ်ကိစ္စကိုပြောရတာက အခုဆို MZ ထဲမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေပါပါလာပြီလေ။ မြန်မာတွေကို အထင်မသေးစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပါ ။ ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။
ISA server ကောင်းပါတယ် ။။။။ အရမ်းကောင်းတဲ့ တစ်ချက်တော့ ဘယ်သူမှ မပြောပါလား ရှိုထားတယ် ဟိဟိ ။။။။။။ ISA server ကို cache လုပ်ပါ ။။။။။။ cache အတွက် Hardisk တစ်လုံးလုပ်ပါ ။။။။။။။။ linux ဆိုရင် ပိုကောင်းတယ် ။။။။။
cache ဘယ်လိုလုပ်ကလဲ ပြောတော့ဘူးနော် ။။။။ cache ကို night မှ update လုပ်ပါ ။။။။ ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ် ။။။။။။ ကျွန်တော်လဲ linux ကို IP ပေးတာရယ်၊ internet connection share ရယ်ပဲသိတယ် ။။။။။။ cache တော့ သိဘူးဗျ၊ ဟဲဟဲ
I find that advices are not much help , I think this software can solve your problem MultiProxy http://proxy.nikto.ne
go and get there but first read how to do in inside folder. or below
What is the proxy address of the MultiProxy?
If you set up the MultiProxy to run locally on the computer you browse from, the proxy will be on localhost or 127.0.0.1 (which is the special name used by every computer on the Internet to refer to itself) and the port will be 8088 (unless you have configured MultiProxy to run onadifferent port). So when configuring your browser's proxy settings you typically enter the word localhost (or 127.0.0.1) in the box next to HTTP/FTP/etc.and 8088 in the box labeled "port".
How do I configure my browser for MultiProxy?
All current browsers can be told the address ofaproxy to use. You enter the same information in all fields in your browser's proxy configuration screen (see list below): HTTP/FTP/etc. MultiProxy supports all protocols, but only if corresponding remote proxy server supports them too. Here are the menus you go through to get to the proxy configuration settings. Make notes on the changes you make so you know how to undo them!
In my point of view please don't give useless advices if you don't know properly because wrong advices get wrong answers to users and wrong application can cause more difficulty and time spend
And i want to use Wi-Max BaganNet
မတူညီတဲ့ ISP နှစ်ခုရဲ့ Connection တွေကိုပေါင်းစည်းချင်တယ်ဆိုရင် ရပါတယ်
အဆိုပါ Connection နှစ်ခုကို switch တစ်ခုတည်းကိုထည့်
အဲဒီ switch ကနေမှ မိမိကွန်ပျူတာရဲ ့interface တစ်ခုကိုလာ
(အဲဒီ interface ကို Wan Connection လို ့အမည်ပေးထားမယ်ဗျာ)
Wan connection ရဲ့ TCP/IP properties မှာ MPT ကပေးတဲ့ IP/subnetmask/gateway တွေထည့်
ပြီးရင် TCP/IP properties ရဲ့ ့advance ထဲမှာ Wimax ရဲ့ IP address တို့ Gateway တို့ကို (Add)ပေါင်းထည့်ပေးလိုက်
Metric ကိုလည်း မိမိဦးစားပေးချင်တဲ့ gateway ကို "1" ကျန်တဲ့ gateway ကို "2"ပေါ့ဗျာ
ပြီးရင် Automatic Metric ကိုလည်း အမှန်ခြစ်ဖြုတ် Interface Metric ကို 1 ပေးလိုက် ပြီးရင် ok တွေနဲ့ထွက်
kozaw.dagon wrote: »
ကျွန်တော်လည်း virutal IP နဲ့ စမ်းရင်ရမယ်လို့တော့ထင်တယ်
ဒါပေမဲ့ default gateway ကို ဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတာ မသိလို့
မလုပ်တာအခု အကိုပြောမှပဲသိတော့တယ် ကျေးဇူးအကိုရေ
အဲဒီ အကိုပြောတဲ့ Metric ဦးစားပေးကို ဘယ်နေရာမှုာလုပ်ရတာလဲဆိုတာကို
With DHCP enabled , virtual ip cant be added.
just remind you.